in Funny, Uncategorized, Unique Things
ဒီတခေါက်တော့ အသက်ရှင်ဖို့နဲ့ ရောဂါပိုးမကူးဖို့ထက် အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိတော့ရင်ဆိုပြီး တွေးပူနေကြတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို Lifestyle Myanmar ပရိသတ်တွေစိတ်ညစ်ညူးပြေစေဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟိုးရှေးတုန်းကမြောက်အမေရိကလူမျိုးတွေ ကလေးအနှီး၊ ဂွမ်း၊ ဓမ္မတာလာခြင်း အစရှိတဲ့အရာတွေအတွက် ရေညှိပျော့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိရင် ရေညှိပျော့တွေကို အစားထိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးတလုံးရှိရင် ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့ ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်မယ့်ကိန်းပါဘဲ..။
မူရင်းစာမှာရေးထားတာတော့ ကျောက်ခဲဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေက တို့ထိရတာပျော်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့..။
ထင်းရှူးရွက်လိုအရွက်နုနုလေးတွေ၊ ပြောင်းဖူးခွံတွေလိုအရွက်တွေက သန့်ရှင်းရေးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဆိုပါတယ်။
Business Card ဒါမှမဟုတ် Name Card
အိမ်သာဝင်နေတုန်း စက္ကူမရှိတော့ရင် ကျောပိုးအိတ်ထဲက လက်ကမ်းစာရွက်တွေ၊ Name Card တွေကို အသုံးချလို့ရပါတယ်တဲ့။
စက္ကူကုန်သွားရင် အဲဒီ့အောက်က အမာခံကတ်ထူပြားကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့။ ဉာဏ်ကြီးချက်နော်။
အင်္ကျီကိုအစလေးတွေ ညှပ်ပြီးဖြတ်ပြီးသုံးပါတဲ့။ ဒီလိုအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို ဘယ်ကရလည်းမသိ..။
ရှေးခေတ်တုန်းက ရောမတွေက ရေမြှပ်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရေမြှပ်ကို ဆား၊ ရှာလရည်တို့နဲ့ ပြန်ဆေးပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့..။
တကယ့်ဆရာကြီးက နောက်ဆုံးမှလာတာ။ ဘာမှမရှိရင်လည်း ရေသုံးပြီး သန့်ရှင်းလို့ရတယ်တဲ့။
ဒီလိုဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို Lifestyle Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း အရေးကြုံရင် သုံးလို့ရပါတယ်နော်..။
လည်ပင်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အထိအခိုက်မခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေမယ့် အထွေအထူးဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲ လျစ်လျူထားလို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကတော့ အရေပြားတွေတွန့်လာခြင်းနှင့် လိုင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုင်းကြောင်းတွေရှိနေတာက လူတွေကို ပုံမှန်အသက်ထက် ပိုပြီး ကြီးရင့်ရောင် ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ပျိုမေတို့ရဲ့ အလှအပအတွက်လည်း...
ကျွန်မတို့အများစုက သံလွင်ဆီကို ချက်ပြုတ်ဖို့နှင့် တို့စရာအရည်လောက်အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင်သာ ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် သံလွင်ဆီမှာ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေက သံလွင်ဆီဟာ နှလုံးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာ သိကြပေမယ့် တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကောင်းကျိုးများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ...
အမျိုးသားတွေက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့မိတ်ကပ်တွေ ပိုပိုလိမ်းလာကြတာ ဘာကြောင့်လဲ?
ကြည်လင်ပြီး glow နေသောမျက်နှာအသားအရေကနေ စိုပြည်တောက်ပနေတဲ့ နှုတ်ခမ်း၊ တောက်ပနေသော eye shadows တွေနဲ့ ကော့ပျံနေတဲ့ မျက်တောင်အတုတွေအထိ ယနေ့ခေတ်ဟာ မိတ်ကပ်တစ်ခုတည်းအတွက်သီးသန့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင် ရှင်သန်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားလာတာတစ်ခုက အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးများနည်းတူ...
စာနာတတ်သူတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘာကြောင့်အတူရှိမနေတတ်တာလဲ
စာနာတတ်သူတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အံ့ဩဖို့အကောင်းဆုံးသတ္တဝါတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ အခက်အခဲဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Empaths တွေက ခက်ခဲနက်နဲသော ဆက်ဆံရေးကို ရရှိဖို့ တကယ်ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်လွန်းသူတွေက ဘာကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရရှိဖို့ဘာကြောင့် ခက်ခဲကြတာလဲ? အောက်မှာ ဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကြောင့်များ...